केपी ओली र माधव नेपालको बोलचाल बन्द
भाद्र २४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच १९ दिनदेखि संवाद नै बन्द भएको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि ओली सिंगापुर जानुअघि ५ भदौमा बालुवाटारमा बसेको बैठक दुई नेताबीचकै भनाभनमा टुंगिएयता भेटघाट तथा छलफल भएको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ,
दुई साताको उपचारपछि स्वदेश फर्किएको चार दिनसम्म पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच भेटघाट भएको छैन । शुक्रबार फर्किएका ओलीसँग अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने चारपटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् । सचिवालयका अरू नेताले पनि ओलीलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राख्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
५ भदौको बैठकमा आफूले दिएको स्वास्थ्यलाभको कामना ओलीले फिर्ता गरेको भन्दै अहिलेसम्म पनि नेपालले असहज महसुस गरेका छन् । सो बैठकमा ओलीले नेपालबाट स्वास्थ्यलाभको शुभकामनासमेत नलिँदा तिक्तता बढेपछि प्रचण्ड, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलले बीचैमा हस्तक्षेप गरेका थिए ।
‘उहाँ (केपी ओली)ले नै स्वास्थ्यलाभको शुभकामना चाहिँदैन भन्दै फिर्ता गरिसकेपछि फेरि जबर्जस्ती घरमै पुगेर अहिले कस्तो छ भन्नु त्यति राम्रो हुने कुरै भएन,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘फेरि पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर मैले उतिवेलै शुभकामना चाहिँदैन भनेको थिएँ, किन आउनुपर्‍यो, चासो राख्नुपर्‍यो भन्ने अमिलो जवाफ आयो भने के गर्ने ? त्यसैले उहाँहरूबीच संवाद हुन नसकेको हो ।’ १९ दिनदेखि संवाद टुटेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल पनि पार्टीको सचिवालय बैठकमै आफ्ना कुरा राख्ने सोचमा छन् ।
सिंगापुरबाट फर्किएपछि क–कसले भेटे प्रधानमन्त्रीलाई ?
प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्किएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भेटेरै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले टेलिफोनमार्फत स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । उपाध्यक्षमा प्रस्तावित वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन सिंगापुर नै पुगेर सँगै फर्किएका थिए ।
त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि सिंगापुर पुगेर स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । अधिकांश मन्त्रीहरूले बालुवाटारमा भेटेरै स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने पहिल्यै स्वास्थ्यलाभको कामना गरिसकेका कारण प्रधानमन्त्री फर्किएपछि व्यक्तिगत भेटघाट नभएको बताए ।
बैठकको तिक्तता, बैठककै छलफलमा अन्त्य हुन्छ
उपप्रमुख, विदेश विभाग
पार्टीमा नियमित बैठक आयोजना हुने, सबैको कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र सौहार्दपूर्ण स्थितिमा निष्कर्षमा पुग्दा व्यक्तिगत मतान्तर स्वतः अन्त्य हुन्छ । पार्टीलाई नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेबित्तिकै मतभेद समाधान भइहाल्छन्, यो नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको मित्रवत् अन्तरविरोध समाधान गर्ने तरिका हो ।
पार्टीभित्र कहिल्यै पनि नेताहरूबीचको सम्बन्ध विपक्षीसँग जस्तो तिक्त हुँदैन, त्यसैले बैठकमा छलफलका क्रममा उत्पन्न तिक्तता र मतभेद फेरि आयोजना हुने बैठकमा छलफलबाटै निराकरण हुनेछ ।
अबको बैठकमा माधव नेपालको पोजिसन
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा नेताहरूको समीकरण फेरिएको छ । यसअघि तेस्रो वरीयतामा रहेका नेपाल समीकरण फेरिएसँगै चौथो वरीयतामा पुगेका छन् । वरीयतालाई स्वीकार गरे पनि नेपालले पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी मुद्दामा नोट अफ डिसेन्ट नै दर्ता गराएका छन् ।
३ भदौमा सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार वा पार्टीको नेतृत्वमध्ये एक जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने गरी ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । तर, नोट अफ डिसेन्टलाई बैठकमा दर्ता गराउनुअगावै सार्वननिक गरेको भन्दै ओलीले यो विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।
पछिल्लोपटक ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत साथमा लिएर वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका छन् भने झलनाथ खनाललाई नेपालभन्दा माथिल्लो मर्यादामा राख्ने निर्णय गराएका छन् । ओलीको यो निर्णयलाई नेपालले आफूलाई एक्ल्याउने रणनीतिका रूपमा लिएका छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा नेपालप्रति प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहानुभूति देखाए पनि प्रस्ट खुलेका छैनन् ।
यस्तै अन्तरकलहबीच अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एकता प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन भोलि (बुधबार) सचिवालय बैठक बोलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । नेपाल भने सचिवालयबाट नोट अफ डिसेन्ट सम्बोधन नभए स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने तयारीमा छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २४ गते मङ्गलवार
माधव नेपालले ल्याए केपी ओलीकाे टाउकाे दुख्ने प्रस्ताव
जीवनभर सङ्घर्षमा रहेका राष्ट्रवादी नेता
एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्चमा
स्थगित भएकाे कक्षा १२ को परीक्षा संचालन हुनेभयाे
२० महिनादेखि काबुलको होटलमा थुनिएका बालकुमारकाे कथा !
काबुलमा रहेका ३ सय नेपालीलाइ अमेरिकाले तयार भएर बस्न भन्याे